Amathuluzi wokuhlaziya we-Semalt
Izindaba Zempumelelo YeSemalt
Ufuna ukukleliswa kakhulu kuGoogle? I-Smalt.net yisixazululo esiphelele sebhizinisi lakho. Inamathuluzi anamandla kakhulu okukunikeza amazinga aphezulu kakhulu kuGoogle. Isayithi linobungane futhi linembile kakhulu. Ngokubuka okukodwa, unakho konke okudingayo ukuze uphumelele ezandleni zakho.
Amathuluzi wokuhlaziywa kweSemalt atholakala kalula kuwebhusayithi. Uthola ukubona imikhiqizo okufanele banikele ngayo, okuningi mayelana nenkampani yabazali, izindaba zabo zempumelelo kanye nezinketho ezahlukene zokuxhumana nabo. Unenketho yokungena noma ukudala i-akhawunti ngeSemalt.net. Ukudalwa kwe-akhawunti kukusiza ugcine amaphrojekthi wakho we-SEO eSemalt.
Ukuhlaziywa kwewebhu kubandakanya ukuqoqa, ukubika kanye nokuhlaziya idatha yewebhu. Kuyinqubo eyinkimbinkimbi esiza ukubona ukuthi iwebhusayithi ithola izinhloso nezinhloso zayo eziyifunayo. Kusuka kudatha ehlaziywe, amasu angcono kakhulu wokwenza ngcono iwebhusayithi ayenziwa. Amathuluzi wokuhlaziya amaSemalt amathuluzi anamandla kakhulu ukukusiza wenze lezi nezinye.
Amathuluzi wokuhlaziya amaSemalt ahlukaniswe izigaba ezi-4.
Kulesi sigaba, uzothola amathuluzi adingekayo ekuhlaziyweni okuphelele kwewebhusayithi yakho. Isigaba seSERP sinezigatshana ezintathu.
a. Amagama agqamile ku-TOP: Lapha uzobona inani lamagama angukhiye isayithi lakho lewebhusayithi ayitholayo kwimiphumela yokucinga ye-Google TOP 1-100 ngokungafani naphambilini. Ubuye ubone ishadi elibonisa inani lamagama angukhiye kuGoogle TOP ngokuhamba kwesikhathi. Ngaleli thuluzi, ungabheka ushintsho kwinombolo yamagama angukhiye i-webhusayithi yakho ayihlela ku-TOP. Ekugcineni, ungabuka amakhasi afakwe kuwebhusayithi yakho nezikhundla zawo ze-SERP zegama elingukhiye elithile.
b. Amakhasi amahle kakhulu: Lapha, uzonikezwa ukuqonda ngamakhasi akho akhiqiza i-traffic amaningi. Uzothola ishadi elibonisa ushintsho enanini lamakhasi e-webhusayithi ku-TOP selokhu kwasungulwa iphrojekthi yakho kuze kube yimanje. Uzokwazi nokwazi inani lamakhasi e-webhusayithi ku-Google TOP 1-100 imiphumela yokusesha ye-organic, ngokuya ngosuku lokuqala. Ungayibheka futhi njengeshadi lebha ngokungafani nesifinyezo samanani esivamile. Kunelinye ishadi esikwazisa ngalo ushintsho kunombolo yamagama okhiye amakhasi akho abekwe kuwo ku-TOP kusukela ngosuku lokuqalisa kwamakhasi akho.
c. Ukuncintisana: ISemalt ikunikeza ukuqondisisa kumawebhusayithi wezimbangi zakho ukuze ufunde kuzo futhi ulungise uhlelo lwakho lwebhizinisi lwamanje ngokufanele. Lokhu kukusiza ukuthi uthole wonke amawebhusayithi afakwa kuGoogle TOP 1-100 yamagama okhiye afana nalawo amazinga akho wewebhusayithi. Uzophinde ukhonjiswe ukuthi yisiphi isikhundla iwebhusayithi yakho esiphethe phakathi kwezimbangi zakho. Uzonikezwa ukuqonda ngenani eliphelele lamagama angukhiye owabiwe izincintisana zakho ezikhethiwe ezikhundleni ku-TOP. Uzothola netafula lapho ungabona khona inani lamagama angukhiye owabiwe i-webhusayithi yakho nezimbangi zakho zincintisana kuzo kuGoogle TOP. Ukusuka kule thebula, ukulandela umehluko enanini lamagama angukhiye owabiwe uma kuqhathaniswa nedethi yokuqala kuba lula.
Kubalulekile kuwe ukuthola ukuthi iGoogle ibheka ikhasi lakho lewebhu njengehlukile noma cha. Omunye umuntu kungenzeka ukuthi ukopishe okuqukethwe kwakho kwekhasi lewebhusayithi futhi uma okwakhe kukhonjiswa maduze kunokwakho, i-Google izomaka ikhasi lakho le-web lithunyelwe futhi lizolebulula ukuthi umthombo wabo wokuqukethwe uyingqayizivele. Uzofuna ukuqapha lokhu ngoba i-Google igwema amasayithi anenombolo enkulu yokuqukethwe okuphindwe kabili. Lapha uzothola ukuthi iGoogle iphatha ikhasi lakho lewebhu njengomthombo ohlukile noma cha. I-Smalt.net ikuvumela ukuthi ubuke isilinganiso sakho samaphesenti ahlukile ukukusiza wazi ukuthi iwebhusayithi yakho ithathwa njengeyingqayizivele noma cha. Isikolo esingu-0-50% siyinto ongafuni ukuba nayo - lokhu kusho ukuthi iGoogle ibheka ikhasi lakho lewebhu liyimpinda. Isilinganiso se-51% -80% sisho ukuthi i-Google icabanga ukuthi ikhasi lakho lewebhu lingabhalwa kabusha. Lokhu kungamamaki aphakathi kepha uSemalt angakusiza ukuthi wenze kangcono. Isikolo esingu-81% -100% siyinkomba enhle yokuthi wenza izinto lapha. I-Google ibheka okuqukethwe kwakho njengehlukile. Lokhu kuthuthukisa kakhulu isikhundla sakho.
Uzothola ithuluzi "lokuqukethwe" elisiza ukubuka konke okuqukethwe i-Google ekubona ekhasini lakho le-web. Ibuye igqamise izingxenye eziyimpinda zokuqukethwe kwekhasi lakho lewebhu.
Elinye ithuluzi oyolithola liyi-thuluzi "lomthombo woqobo" eletha wonke amasayithi i-Google ebheka imithombo eyisisekelo yokuqukethwe kwekhasi lakho le-web. Iphinde ikukhombise ingxenye eqondile yokuqukethwe kwakho okutholakala kulawo amanye amawebhusayithi ukuze ubheke kulezo zindawo ukukhulisa kangcono isilinganiso sakho sobunye. USemalt unethimba lababhali abangochwepheshe abangakusiza wenze okuqukethwe kwekhasi lakho lewebhu kuhluke ngangokunokwenzeka. Bangathintwa kalula ku-smalt.com.
Abaphathi beWebhu beGoogle
Ngemuva kokungena ngemvume ku-akhawunti yakho yakwa-Google, uzokwazi ukufinyelela kuthuluzi le-Google webmasters. Kulesi sigaba, uzobona ukuthi iwebhusayithi yakho ivela kanjani emiphumeleni yokucinga kuGoogle. Kuzokusiza ekuboneni izingqinamba zenkomba. Uzokwazi futhi ukuthumela amawebhusayithi akho nama-sitemaps njengohlu lonke futhi ucele ukukhonjwa kwabo yi-Google.
Futhi uzokwazi ukufinyelela kumamethrikhi aphakamisa ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Lokhu kusiza ekuboneni ukuthi wenzani okulungile nokuthi lezo zinto zenza okungalungile zivimba indawo yakho ukuthi ibekwe ku-Google TOP 1-100.
Ithuluzi le-sitemap likuvumela ukuthi uthumele isayithi lemephu yewebhusayithi yakho ku-Google ukuze ufunde ukuthi yimaphi amasayithi abhalwe inkomba nalawo anamaphutha.
Ukuhlaziywa kwejubane lekhasi kuyithuluzi elinamandla elibonisa isikhathi sakho sokulayisha ikhasi, inani lokuhlola okuphumelelayo onalo nenombolo yamaphutha okufanele ulungiswe. Leli thuluzi likunikeza amaphuzu amaphesenti womabili ama-desktop nezinguqulo zeselula zekhasi lakho le-web. Ijubane lokulayisha lewebhusayithi yakho lithinta isikhundla sakho, ngakho-ke leli thuluzi alinamanani.
Amaphuzu we-0-49 akhombisa ijubane elihamba kancane. Isibalo se-50-89 sibonisa isivinini esijwayelekile sokushwibeka inani eliphezulu le-90-100 libonisa isivinini esihle.
ISemalt ikunikeza nokuqonda ukuthi iwebhusayithi yakho iyisebenziseka kalula kanjani ngokushumayeza inqubo yokulayisha esipheqululini sedeskithophu nakwisiphequluli esisebenza ngeselula. Lokhu kusiza ukukubonisa ukuthi silungiselele kanjani ikhasi lakho lewebhu ukukhushulwa kwe-Google SERP.
Uma ungena kwi-akhawunti yakho, uyiswa kudeshibhodi yakho lapho uzothola khona izinketho zokusebenzisa izihlungi ukuthola amaphrojekthi akho adingekayo futhi uthole idatha yamanje. Ungahlela amaphrojekthi akho ngokungeza izingcezu. Futhi unenketho yokuhlela amaphrojekthi akho ngezindlela ezahlukahlukene zokubheka inqubekela phambili yamawebhusayithi akho.
I-Semalt inikeza imikhiqizo engcono kakhulu yokusebenziseka kahle kwe-SEO yakho. Imikhiqizo efakwe kuhlu ifaka phakathi:
I-AutoSEO: Lokhu kukusiza ukukunikeza kangcono ukwenziwa kwewebhusayithi, kuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho, kusiza ukuheha izivakashi ezintsha futhi kukhuphula ubukhona bebhizinisi lakho online. Insizakalo ye-AutoSEO Semalt ihlinzeka ingeyesibili kulokhu.
I-SEO Egcwele: Nge-SEO Egcwele, iSemalt ikunikeza kangcono ukwenziwa kwewebhusayithi, i-ROI enhle, ikusiza ukuthi utshale imali yakho nekusasa lakho ngobuhlakani futhi unikeze imiphumela esheshayo, esebenzayo neyesikhathi eside. Ungabalwa phakathi kwamawebhusayithi we-Google TOP 100 lapho uqala umkhankaso wakho ogcwele we-SEO nge-Semalt.
I-E-commerce SEO: Ngeke uthole umkhankaso ongcono we-SEO kuwebhusayithi yakho ye-E-commerce kune-Semalt's E-commerce SEO. USemalt wenza umsebenzi wakho - aletha amakhasimende empeleni! Basiza ukuthuthukisa imibuzo yamagama asemqoka ephansi yokuvamisa ukubonakala kubavakashi, bakunikeza ukuhlaziywa kwe-niche futhi ukhokha kuphela imiphumela.
Ukuhlaziywa: Amathuluzi okuhlaziya iwebhusayithi we-Semalt akusiza ukuthi uqaphe imakethe yakho, ulandelele isikhundla sabancintisana bakho maqondana nokwakho futhi baletha imininingwane yebhizinisi le-topnotch ephelele. Uzothola izimakethe ezintsha. Baze bakusiza ukuguqula idatha yakho ibe amafomethi we-PDF ne-EXCEL - okusindisa impilo okunje!
I-SSL: ISemalt inikela ngokuphepha kumawebhusayithi akho. Lokhu kuqinisekisa ukuvikela ubumfihlo kwabasebenzisi bakho. Uzoba nezivakashi eziningi ezivela ku-Google ne-Google Chrome ikunika umugqa oluhlaza.
Ngemuva kokubukeza amathuluzi nemikhiqizo kwaSemalt.net, sithola ukuhlangana neSemalt ezingeni elijulile.
Lapha uthola ukubona iqembu labo elisebenza kahle labachwepheshe futhi uthole nokubuka indawo yabo yokusebenza.
Imikhiqizo kaSemalt iyabiza kakhulu ngoba ifuna ibhizinisi lakho ngempela ukuba liphumelele. Kunecebo ngawe uma ufuna ukusebenzisa izinsizakalo zabo njalo ngenyanga, njalo ezinyangeni ezi-3, izinyanga ezi-6 noma ngonyaka.
Amaklayenti kaSemalt ajabule ashiya ngabomvu ukubuyekezwa kwamazinga aphezulu okuguqula abelokhu enawo kusukela anikezela amabhizinisi abo ezandleni eziphephile zikaSemalt.
I-blog ye-Semalt itholakala wonke umuntu odinga imininingwane ebalulekile mayelana ne-SEO kusuka kwizisekelo kuya ezindabeni zakamuva zezimboni.
Esikhungweni sosizo seSemalt, ungathola usizo uma unamathela.
Uhlelo Lokuthengisa kabusha
Ufuna ukwenza imali eyengeziwe? USemalt ukwambeshele ngohlelo lwabo lwabathengisi lapho uthengisa kabusha imisebenzi yabo ye-topnotch SEO.
IZITOLO ZOKUFUNDA KWESEMALT
Ungathola amawebhusayithi angaphezu kuka-5000 asephumelele kakhulu ngenxa yeSemalt. Awucabangi yini ukuthi isikhathi sakho sokuba kuwebhusayithi yakho kulolo hlu?
USemalt ungumphakathi. Ungaxhumana nabo kuma-media social, i-imeyili kanye nezinombolo zabo ezishisayo ziyatholakala nazo. Ungaphonsa ngekheli labo lendawo uma ungumakhelwane.
Umuntu akakwazi ukuphika iqiniso lokuthi uSemalt uzinikele kakhulu empumelelweni yamakhasimende abo kusukela ezinhlwini zamathuluzi anamandla abanikeze wona. I-Semalt nakanjani iyisixazululo se-gob sokuxazulula zonke izinto ezihlobene ne-SEO. Ibhizinisi lakho nakanjani lisezandleni eziphephile.